Miyuu Iniesta Dheelayaa Kulanka Chelsea & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Caafimaadka Xidigaan %
Xidiga khadka dhexe uga cayaara Barcelona, ee Andres Iniesta, ayaa wuxuu kusoo laabtay tababarka maanta oo Khamiis ah, isagoona qaatay tababar gooni ah, si uu dib ugu badqabkiisa kulaamda kusoo wajahan kooxdiisa.
Laacibkaan dalka Spain, udhashay ayaa wuxuu dhaawacmay kulankii ay Bluagrana 1-0 uga badiyeen Atletico Madrid, Axadii lasoo dhaafay, isagoona ka dhibtoonaya dhaawac dhanka Muruqa ah, sida ay xaqiijisay kooxdiisa.
Laakiin, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday Wargeyska SPORT, ee dalka Ingiriiska Iniesta ayaa wuxuu yahay mid kasoo kabanaya dhaawacaan, isagoona Labo maalmood oo uu qolka Jirdhiska ku jiray hada tababarka diyaar usoo noqday.
Waxaa la filayaa inuu dheelo kulanka Isbuuca dambe ka dheeli doonto horyaalka La Liga, kaasoo ay la balansan yihiin Malaga, markaasoo hadii ay Barcelona guul weyn ay gaarto ay hogaanka horyaalka La Liga ay sii dheereysan karto
Sida laga soo xigtay SPORT, Iniesta ayaa wuxuu diyaar unoqon karaa dheelista ciyaarta Chelsea, taasoo ka tirsan lugta labaad ee Champions League, xili lawada ogyahay in labada dhinac ay kusoo kala baxeen lugtii hore Bareejo 1-1 ah.
Kabtan Iniesta, ayaa wuxuu hada yahay mid dareemaya wanaag badan, isagoona diyaar u ah, sida muuqata inuu daafaco maaliyada Barcelona – Sikastaba, ciyaaryahankaan ayaa wuxuu kamid yahay xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda macalin Ernesto Valverde.
Xidiga Man Utd Ee Romelu Lukaku Oo Fariin Hanjabaad Ah U Diray Liverpool Ka Hor Kulanka Premier League